०३९ सालमा यसरी सिद्धिए सिपी मैनाली ! अहिले केपी ओली उही हालतमा - Gandak News
०३९ सालमा यसरी सिद्धिए सिपी मैनाली ! अहिले केपी ओली उही हालतमा
गण्डक न्यूज द्वारा २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १७:१५ मा प्रकाशित 0
पत्रपत्रिका, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले जुन स्थितिमा छन्, पूर्व एमालेभित्रका मालेकालीन नेताहरुको बुझाई छ, उनको यो अवस्था ०३९ सालका सिपी मैनालीसँग ठ्याक्कै मिल्छ ।
मदन भण्डारी नेतृत्वको मुक्तिमोर्चासहित पूर्वको रातो झण्डा, दाङको सन्देश समूहजस्ता साना कम्युनिष्ट घटकबीच एकीकरण भएर नेकपा (माले) गठन हुँदा त्यसको महासचिव थिए सिपी मैनाली । यसरी भर्खरै एकीकरणको प्रक्रियाबाट पार्टी चलाउने क्रममा अहिलेका केपी ओलीझैँ सिपीमा एक किसिमको तानाशाह स्वभाव सवार भयो । मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, माधव नेपाल, अमृत बोहोरा, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल प्रदीप नेपालहरुले त्यसको निरन्तर प्रतिवाद गर्नुभयो ।
सातौँ बैठकदेखि सिपी अल्पमतमा पर्दै जानुभयो । तर, जे गरे पनि उहाँ महासचिव छाड्न नमान्ने । हटाउने कुरा निस्कियो कि, ‘लु, तिमीहरु नै चलाऊ’ भन्दै माइन्युट फ्याँकेर हिँड्ने † यतिसम्म कि, ०३२ सालमा विराटनगरमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (कोके) गठन गर्दाका सहयोद्धालाई पनि ०३३ सालमा नख्खु जेलब्रेक गरेर आएपछि देखिनसहने अवस्थामा सिपी पुग्नुभयो । फलतः एकदिन मदन भण्डारीले सिपीलाई बैठकमै हप्कीदप्की गर्दै ‘यो–यो भाषा लेख्नुस्’ भनेपछि सिपी त्यही–त्यही भाषा लेख्न बाध्य हुनुभयो । जसमा थियो, आफैँलाई महासचिव पदबाट मुक्त गरिएको व्यहोरा † समर्थकहरुका अगाडि, आफैँले चलाएको बैठकमा, आफैँले लेखेको माइन्युटबाट कारवाहीमा परेँ भन्न लाज हुने भयो । यसबारे आज पनि सिपीले भन्ने गर्नुभएको छ, ‘मलाई मदन भण्डारीले डिक्टेट गरेर हटाए । म यसै पनि छोड्न तयार थिएँ । छोड्ने मौका नै नदिई कारवाहीका नाममा बद्नाम गरियो ।’
– जन आस्था साप्ताहिकबाट